News - Ntinye aka na Naturepoly guzobere Luna banyere PLA Straw
Q1: Gịnị bụ PLA?
Luna: PLA na-anọchite anya Polylactic Acid. A na-eme ya, n'okpuru ọnọdụ ndị a na-achịkwa site na osisi fermented dị ka stachi ọka, akpu, okpete na pulp pulp. Ọ bụ uzo ma sie ike.
Q2: Ndi ahia gi?
Luna: Ee. Anyị na-enye ngwaahịa ndị ahaziri iche, dị ka akara obibi akwụkwọ, ihe eserese na slogans na ahịhịa, ahịhịa nwere agba kwekọrọ na agba pantone nke onye ahịa kwuru. Enwekwara ụdị nkwalite nke PLA iji jide n'aka na ha nwere ike ịbanye n'ime ihe nkiri ahụ na-ekpuchi iko ndị nwere ike ịchụpụ, ewepụtara maka ndị ahịa ahịa ahịa anyị.
Q3: Ebee ka a ga - eji ahịhịa ọka PLA?
Luna: Afọ tii, ụlọ ahịa kọfị, ụlọ mmanya, klọb, nkwụsị, n'ụlọ na nnọkọ.
Q4: Akwukwo ihe ndi ozo na-eme ihe omuma, ebe uwa gbanwere site na otu plastic (SUP). Kedu usoro ndị ọzọ ọhụụ ọhụrụ maka SUP ị nwere maka anyị?
Luna: Mbelata nke iji plastik n'ụlọ nri na ụlọ tii anaghị ezu. Anyị hụrụ mkpa ọ dị maka eco-enyi na enyi ngwọta na ulo oru ahịhịa nke, dị ka obere U ekara na telescopic ahịhịa mmasị mmasị ụmụaka ihe ọ andụ andụ na mmiri ara ehi igbe.
Ọ pụtara imeri ihe ịma aka nke imepụta ihe dị ntakịrị nke 0.29 sentimita asatọ / 7.5 millimeters na ịmepụta usoro nhazi nke PLA maka ọfụma siri ike nke nwere ike ịmị akara nke igbe ihe ọ drinkụ drinkụ. E wezụga nke ahụ, anyị bụ ndị mbụ na-emepụta n'ụwa na-enye okpomọkụ na-eguzogide PLA ahịhịa. Anyị ahịhịa nwere ike iguzogide okpomọkụ ruo 80 Celsius.
Q5: Ogologo oge ole ka ahịhịa na-ewelata?
Luna: Mbibi nke ngwaahịa anyị agabigala ule nke TUV Austria, Bureau Vitas na FDA duziri. N'ebe a na-emejuputa ahihia ebe ahihia, ahihia ahihia kpamkpam n'ime ubochi 180.
N'ebe obibi composting n'ụlọ, ahịhịa PLA na-agbada kpamkpam n'ihe dịka afọ 2. (Compost na kichin ahihia).
Na gburugburu ebe obibi, ahịhịa na-ewe ihe dịka afọ 3 ruo 5 iji belata kpamkpam.
Q6: Olee okpomọkụ-resisitant nwere ike gị PLA ahịhịa ịbụ?
Luna: Oke okpomọkụ na - eguzogide okpomọkụ nke ahịhịa PLA anyị bụ 80 Celsius.